ဘဝမှတ်တိုင်: MAVEN Music Player (Pro) v1.17.73 For Android
ဖုန်း Root လုပ်နည်းများ
ကျွန်တော်ဘလော့ဂါလေးကို လာကြည့်သူအပေါင်းတို့ ကိုယ်စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျှက်ပါ၊...
MAVEN Music Player (Pro) v1.17.73 For Android
သီချင်းတွေနားထောင်ရတာအသံထွက်ကောင်းတဲ့ Player ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗျာ။ Audio Setting ကိုမိမိစိတ်ကြိုက် Control လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ သူ့ကိုကြိုက်တဲ့အချက်လေးကတော့ Sleep Timer ပေးထားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ သီချင်းနားထောင်းရင် အိပ်တက်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအဆင်ပြေစေမှာပါ။ Timer ပေးထားလိုက်တော့ အချိန်ပြည့်ရင်သူ့အလိုလို ပိတ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ Audio Format အားလုံးကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.2 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ သူ့မှာပါဝင်တဲ့ Feature တွေကိုအောက်မှာအသေးစိတ်ရေးပေးပါထားပါတယ်ဗျာ။
MAVEN Effect(3D sound)
XOME-i(Externalization), Live(Reverberation), Mex(Maestro), EVS(Virtual Speaker)
9 band graphic equalizer, 13 default preset (Voice, Jazz, Classic, etc), Custom preset (Save, Remove)
Response Curve of Equalizer
Volume Control (Media Volume, Pre Volume, Left/right channel adjustment)
Display lyrics in tag including lyrics search via Alsong plugin
Play music by artits, albums, songs, playlists, genres and folders
Multi Select, Delete, Play, Add to Playlist
Repeat and Suffle
configurable widget types (size: 4x1, 4x2, 4x4)
Read Phone state (In order stop/resume playback during incoming / outgoing calls,
Player requires read only rights to read phone state)
Moving the SD Card
Help of Play, Volume, Effect
** Step-1.အောက်က Download Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
** Step-2. "5sec". လောက်စောင့်ပေးပါ။
** Step-3. " << SKIP AD >> ".ကိုနှိပ်ပေးပါ။
** Step-4. Download Link ကျလာပါလိမ့်မယ်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 1/05/2014 04:56:00 am
အမြဲ update ဖြစ်နေမှာပါ Kyaw San
ချွတ်ယွင်းဖောက်လွဲ အိုင်မမြဲသည့် ကျွဲတို့ပမာ ငယ်ကြင်ရာ၌ သစ္စာသွေစောင်း မေတ္တာပြောင်း၍ အသစ်ကိုသာ ရှာတတ်စွာခဲ။ ကညာရွယ်နှစ် နုငယ်မြစ်နှင့် အသစ်ကိုတွေ့အဟောင်းမေ့လျှက် တပ်ပွေအာသာ ကြိုက်ရာရာတိုင်း သူမှာအတင်းလိုက်ရှောင်းကွင်း၏ မယွင်းစဉ်စစ် ထိုသို့ဖြစ်၍ အချစ်လိုက်စား ယုံမိမှားလျှက် ယောကျာင်္းဗာလလူပါပနှင့် တွေ့ရကြုံရ ပေါင်းဆုံရသော် မိန်းမတို့ထုံးငွေကုန်ရှုံးက သက်ဆုံးမတိုင် ကိုယ်ပိုင်ယောကျာင်္းသွေဖောက်ပြား၍ တရားမစောင့် မဖြောင့်နှလုံး လင်ကုန်ရှုံးက သက်ဆုံးတိုင်လစ် ပြောရာဖြစ်ရှင့် အနှစ်ပညာမရှိပါက အင်္ဂါခြေလက် ယောကျာင်္းလျှက်လဲ ယုတ်မာအဆုံးမိုက်လုံးထွားသည် နွားနှင့်ကျားနှင့်အတူတည်း။
XIAOMI ဖုန်းများအတွက် Zawgyi မြန်မာ font သွင်းနည်း
Install Zawgyi Font And Keyboard Font သွင်းရန် ၂ နည်း ရှိသည်။ Mi 3, Mi4တို့တွင် developer rom ဖြစ်ပါက theme ပြောင်းရုံဖြင့် ရသည်။ M...
ရေဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ Huawei G610 U00 ဖုန်းအကြောင်း
မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်အခါသမယမှာ ... (အခြားသူများ မင်္ဂလာ ရှိမရှိတော့ မသိပါ ဖုန်းဆားဗစ်ဆရာများတော့ သေချာပေါက် မင်္ဂလာ ရှိပါသည် သင်္ကြန်မှာ ရေချိုး...
No need root COCမြန်မာဖေါင့်ထည့်နည်းပါ
https://play.google.com/store/apps/details… No need root COCမြန်မာဖေါင့်ထည့်နည်းပါ လိုအပ်သောapk အပေါ်ကဒေါင်းပါ ကျနော်ပုံနဲ့...
BACK LIGHT ပျောက်လျှင်
စက်နိုးသော်လည်းရုပ်မပေါ်ဖြေရှင်းနည်း။ credit to ဆရာကိုမောင်နှိူင် ပုံထည်းမှာပြထားတဲ့အပိုင်းကို ကိုင်ရမှာပါ။sup...
Huawei 4.3 များအတွက် Google App( For Android )
Huawei ဖုန်းများအတွက် Android OS 4.2 ကနေစပြီး Google App များသွင်းလို့ အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး အခုတော့ အဆင်ပြေပါပြီ ကျွန်တော် တော့ ဒေါ...
Hardware လေ့ လာ သူအတွက် အခြေခံ
ခုမှ Hardware လေ့ လာ သူအတွက် အခြေခံ ကိုအကြမ်း ရေး ထားတာ ဖြစ်လို့ မပြည့်စုံပါဘူး ... အမှား ပါ ရင် ဆရာ တွေ ပြင်ပေး ကြပါ ခင်ဗျာ ... မိုဘိုင...
Huawei C8816 အတွက် Special Root Tool
C8816 အတွက် ဘာနဲ့မှမတူတဲ့root file လေးပါ exe file လေးကို run ပြီးအောက်ကပုံမှာပါတဲ့အတိုင်းတစ်ဆင့်ချင်းဆီလုပ်သွားယုံပါ ရှာရတာတော့တော်တော်ခက်ပ...
Android ဖုန်းသို့ Zawgyi Font သွင်းနည်း by Ko Htun on Friday, May 11, 2012 at 1:51pm · Android ဖုန်းသို့ Zawgyi Font သွင်းနည်း...
verification error အတွက် build prop ပြန်ရေးနည်းနှင့် Step2Fail error အတွက် official Firmware ပြန်တင်နည်း
ခုဖော်ပြပေးတဲ့ နည်းလမ်းလေးကတော့သိပြီးသား သူငယ်ချင်းများလည်း သိပြီးသားပါ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ပါ facebook က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရေး...
Huawei G730 ကိုမြန်မာစာသွင်းဖို့ Myanmar Font APK
Huawei G730 အတွက် မြန်မာဖောင့်ကို APK အနေနဲ့ Mpx မှ ကိုရဲလင်းအောင် မှ တီထွင်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ One Click APK ဖြစ်တဲ့ အတွက် သုံးရတာ...
Lenovo ဖုန်းမြန်မာစာထည့်နည်း ( Sony- Huawei_Samsung တွေလည်း ဒီနည်းနဲ့ ထည့်ရပါတယ်) (1) Root ဆော့ဝဲကို ဖုန်းထဲထည့်ပြီး Root အရင်လု...
Huawei G730-U00 နဲ့ Y511 တို့အတွက် Myanmar Font Installer
Huawei G730-U00 Myanmar Font Installer (One Click Tool) Huawei G730-U00 နဲ့ Y511 တို့အတွက် Myanmar Font Installer ပါ။ တခြား Font...
Huawei G730-U30 အတွက် Root & Google App သွင်းနည်း
Root လုပ်ရန် Root file အရင် Download လုပ်ပါ.... g730-u30 root.zip အရင်ဆုံး KingRoot APK (OR) Here ကို install ၍ Roo...
Click တစ်ချက်နဲ့ Full Version ဖြစ်တဲ့ IDM 6.19 build 8 (Latest Version , No Patch , No Crack !!!)
ဒီ IDM ကတော့ Patch ,Crack တွေ မသုံးတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ... ဘာမှ ထူးထူးထွေထွေ လုပ်ပေးနေစရာ မလိုပါဘူး.. ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ Rar ဖိုင်လ်...
Windows 8 Font Changer
Windows 8 Font Changer windows 8 and 8.1 မှာ မြန်မာစာ အစဉ်မပြေတဲ့ သူတွေအတွက်ပါ.. windows7မှာ လို Desktop (right click) က...
Emotion UI Fonts Installer -Huawei ဖုန်းအများစုတွင် Root Access မလိုပဲ မိမိနှစ်သက်သော ဖောင့် Style ထည့်သွင်းမယ်
Emotion UI ပါရှိသော ဖုန်းများဖြစ်သော Huawei ဖုန်းအများစုတွင် Root Access မလိုပဲ မိမိနှစ်သက်သော ဖောင့် Style ထည့်သ...
Sony Xperia Z2/Z3 Lollipop 5.0.2 ကို Root & Myanmar Font ထည့်သွင်းနည်း
Shan Lay: Sony Xperia Z2 D6502 ကို Myanmar Zawgyi ပေါ်အောင်ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ? Root access ရမှသာလျှင် မြန်မာစာကို ကောင်းမွန်စွာ ...
gsm network မှ 2G(E) ကို 3G(H+) network ပြောင်းသုံးမယ်....
ဒီ apk လေးကတော့ စက်ရုပ်ကိုင်ဆောင်သူတိုင်း ရှိထားသင့်ပါတယ်ဗျ...... ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါမှာ gsm...
Huawei C8816 , C8816D , G615-U10 Jumper Way
Huawei C8816=C8816D-G615-U10 လိုအပ်သူတွေအတွက် Jumper way များတင်ပေးလိုက်ပါတယ် C8816 နဲ့ C8816D=G615-U10 တို့၏ဘုတ်ပြားပေါ်ရှိ ic ဖွဲ့စည်းမ...
▼ 2014 (1285)
Hacking ကိုကလိချင်သူများအတွက် - Elite Keylogger v5...
Stellar Phoenix Photo Recovery 6.0.0.1 For Pc(10MB...
မင်းဒင်ရဲ့သက်ခိုင် စာအုပ် အစအဆုံးဖတ်လို့ ရပါပီ အား...
Android Phone ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် Myanmar Facebo...
HUAWEI မြန်မာဖောင့် ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း
မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးလမ်းညွှန် - SM3 Mobile Directory ...
သင်မေ့နေသော Facebook Passwordကိုပြန်ရှာပေးနိုင်တဲ့...
ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ ဖုန်း Free ခေါ် လို့ရမယ့် Applicatio...
What is Root? (Root လုပ်သင့် မလုပ်သင့်)
ဓါတ်ပုံတွေကို ပန်းချီအဖြစ်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲံ - Pape...
PC & Internet Speed ကိုမြှင့်တင်ပေးမယ့် - PC Clean...
Facebook Account ရဲ့ Password ကြည့်နိုင်တဲ့ - Face...
Fb 2in1 apk
ဓါတ်ပုံများကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်မယ့် - BeFunk...
Mobile AntiVirus Security PRO v3.4.2.1 APK
မြန်မာမိုဘိုင်းဖုန်း ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု ခြောက်လ အခမ...
Adobe Photoshop CC 14.1.2 Final Portable
Video , Audio တွေကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်တဲ့ Son...
WinX HD Video Converter Deluxe 5.0.3.181 For All W...
ဘောလုံးဝါသနာရှင်များအတွက် - Score! World Goals v2....
Windows Server 2008 အကြောင်း ( မြန်မာလို )
How To Make Virus ( မြန်မာလို )
ပန်းအိုးလှလှလေးတွေဖန်တီးနိုင်မယ့် - Let’s Create! ...
CDMA အကြာင်း သိကောင်းစရာ
ATM အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ ငွေထုတ်စက်အကြောင်း သိကောင...
မိမိစိတ်ကြိုက် Screensavar ဖန်တီးနိုင်မယ့် - Power...
ဆရာမင်းခိုက်စိုးစံ စာအုပ်တွေ ဖတ်ချင် စုချင်သူများအ...
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် တန်ဖိုးနည်း မိုဘိုင်းဖုန...
ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ Network ချိတ်နည်း
သြကာသ (for android )
ကိုရီးယားစကားပြော (for android)
Gtalk ,Facebook တို့ လို Viber ကို Off Line ထားပီး...
Internet Speed Meter v1.3.3 APK
Easy SMS Pro v3.3.0 apk
Photo Slideshow Maker v2.2 (Android ဖုန်းနဲ့ Photo...
Facebook 2in1 v3.0 (Android ဖုန်းနဲ့ Facebook က Ph...
Mojosoft Photo Calendar Studio 2014 v1.16 + Serial...
ကွန်ပျူတာရဲ့ Error တွေကို အလွယ်တကူ ရှင်းပေးတဲ့ Win...
Sound Effect ပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့ - Equalizer + P...
ဟာသရုပ်ပြောင်တွေဖန်တီးနိုင်တဲ့ - Morpheus Photo An...
ဖုန်းတစ်လုံးမှာမရှိမဖြစ် စွယ်စုံသုံး - Advanced Mo...
Facebook v7.0.0.0.1 APK (နောက်ဆုံးထွက် Version)
Secret Video Recorder Pro v10.0 Apk
2014 စံဇာဏီဘို၏ 12ရာသီဟောကိန်းကို ဖုန်းထဲကနေ ဖတ်ချ...
ဖုန်းနဲ့ကာရာအိုကေ သီချင်းဆိုခြင်တဲ့သူများအတွက် AP...
Viber မှာ Offline လုပ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်
ဘာမှမသွင်းပဲ Memory Full ဖြစ်ဖြစ်နေသူများအတွက် ဆော...
Huawei Y511 ဖုန်းများတွင် မြန်မာစာထည့်သွင်းနိုင်သည...
ဓာတ်ပုံအတွက် Frame လှလှလေးတွေထည့် ကာလာအမျိုးမျိုးေ...
Myanmar News Channel For Android
မြန်မာစစ်တုရင်ကို ANDROID ဖုန်းနဲ့အွန်လိုင်းမှာကစာ...
System app remover v3.0.1035 for Android
ဖုန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် - Sm...
Sony Xperia Z ကို Android version 4.2.2 တင်နည်း + ...
Music Player (Remix) v1.4.8 APK
မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ - Zapya v2.1 ( Myanmar Version)
Samsung Galaxy Mega 6.3 i9205 ကို Root လုပ်ခြင်း, ...
LG Optimus L7 (P-705) ကို Root လုပ်နည်း + မြန်မာစာ...
ACDSee Photo Editor 6.0 Final (ဓာတ်ပုံ Editing ဝါသ...
ကွန်ပျုတာမလိုပဲ ဖုန်းထဲကနေ Root လုပ်နည်းနှင့် မြန်...
Apple ID အသစ် လွယ်ကူစွာ ဖွင့်လှစ်နည်း
Talking Tom & Ben Newsv2.0.1 For android game(31MB...
မြန်မာဖောင့်ထည့်ချင်သူများနဲ့ မြန်မာစာ မမှန်သောဖုန...
ဖိုင်လ်ဆိုက်ဒ် အသေးဆုံးနဲ့ CD/DVD တွေ ဘန်းနိုင်တဲ့...
အသုံးဝင်သော Website များ
မြန်မာစာ သွင်းလို့ မရတဲ့ Android ဖုန်းတွေအတွက် (Ne...
Phone INFO မိမိဖုန်းကိုပြည့်စုံစွာသိစေမယ်
အမျိုးသမီးများအတွက် သီးသန့် APK
Android Phone Root လုပ်ချင်သူများအတွက် Root လုပ်နည...
CamScanner Phone PDF Creator Full v3.0.0
Samsung Galaxy ဖုန်းအမျိုးအစားတွေ အတွက် Root လုပ်စ...
ဘိလိယက်ဝါသနာရှင်များအတွက် - Pool Break Pro v2.3.5 ...
ဖုန်းထဲကနေ RAR ဖိုင်နဲ့ZIP ဖိုင်တွေကို ဖြည်ဖို့ ...
၂၄ ပစ္စည်း ( for android )
Download မယူတတ်သေးသူများအတွက် Zippyshare မှ မှန်မှ...
စာရေးဆရာ မင်းလူ၏ စာအုပ်များ ဖတ်ချင်ရင် တစ်ခါ Downl...
အကြည်တော် စာအုပ်များ တစ်နေရာထဲမှာ တစ်ခါဒေါင်းတာနဲ ...
Huawei G610-C00 Firmware (4 Build Number)
Acer Liquid Z3 Root လုပ်ခြင်း + မြန်မာစာ ထည့်သွင်း...
ဘောလုံးပွဲသတင်းတွေ ပွဲစဉ်ဇယားတွေ ဂိုးရလဒ်တွေ ဖုန်း...
ဓါတ်ပုံများကို အလှပဆုံးပြုပြင်နိုင်တဲ့ - PhotoSuit...
Note2version 4.3 မြန်မာစာပါသော Thaiကထုတ်သော vers...
✔Moon Reader PRO v2.3.4 Full App✔
✔My Backup PRO v4.0.5 Full Version App✔
✔Fast PRO For Facebook v2.3 Latest Full Version2.3...
Description MMSD Sony Installer v1.0(Beta)
Window နဲ့ Microsoft Office Update မဖြစ်လို့ စိတ်ည...
၀တ္ထုစာအုပ်ဖတ်ချင်သူ စာအုပ်တွေ စုထားချင်သူအတွက် ဆြု...
Facebook က Poke တယ်ဆိုတာ
Facebook System အားလုံးကို Myanmar Lunguage ပြောင်...
Computer ကနေ ကာရာအိုကေဆိုချင်လည်းရ အသံလည်းကျယ် Fal...
ဖိုင်လ်ဆိုက်ဒ် အသေးဆုံးနဲ့ Format ပေါင်း များစွာကိ...
evasi0n7 - iOS 7.x Jailbreak Tool 1.0.4 (New Updat...
Huawei ဖုန်းများ Firmware တင်နည်း + Root လုပ်နည်း...
မြန်မာစာမမှန်တဲ့ဖုန်းတွေ ၀က်ဆိုဒ်တွေ ကြည့်ရင် အတုံ...
Facebook နောက်ဆုံးထွက် Version Updated 13-1-2014 သ...
App တစ်ခုတည်းနဲ့ Root လုပ်ခြင်း Myanmar Font ထည့်သ...
Android ဖုန်းအတွက် ဒီဇိုင်း ၈မျိုးပြောင်းရတဲ့ စာရိ...
ကီးဘုတ်ပုံလေးပေါ် ကလစ်ပေးပြီး ပေးထားသော သီချင်း ကုပ်စာလုံးလေးများအား မှတ်ပြီး ရိုက်ကြည့်ပါ။ (right here waiting for you )သီချင်း တစ်ပိုင်းတစ်စလေး ရိုက်ကြည့်ပါ။ ကဲ စ ________ t o s h h gfd – w y oddfgf-e u s sdfdsap o – 8 w t o o i u y –59 w y y u i u –60 t t y u i u y t r t – t o s h h gfd
ယခုလိုလာရောက်ကြည့်ရှု့အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပါခင်ဗျာ။. Watermark theme. Theme images by mevans. Powered by Blogger.